Jabhadda Oromada Oo Dishay 50 Askari Itoobiyaan Ah Dagaal Ka Dhacay Duleedka Addis Ababa. – Calamada.com
Jabhadda Oromada Oo Dishay 50 Askari Itoobiyaan Ah Dagaal Ka Dhacay Duleedka Addis Ababa.
calamada October 18, 2016 2 min read
Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo dhiig ku daatay ay markale dib uga qarxeen degmooyin iyo deegaano katirsan dhulka muslimiinta Oromada leeyihiin.
Kumanaa katirsan melleteriga Itoobiya ayaa u dhaqaaqay gobolka Oromiya si ay u dhaqan geliyaan xukunka xaaladda degdegga ah ee wadanka lagusoo rogay balse iska caabin adag ayay kala kulmayaan dadka deegaanka.
isgaarsiinta oo laga jaray gobollada dagaalladu ka socdaan ayaa sababtay in aan la helin xogta tifaftiran oo ku saabsan waxa ka socda Itoobiya.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka shacbiga Itoobiya ayaa sheegay in dagaallo culus oo lagu laayay ciidamo Itoobiyaan ah ay sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen gobolka Borane oo kaabiga ku haaya magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 50 askari oo katirsan melleteriga Itoobiya lagu dilay dagaallo saacado badan qaatay oo jabadda xureynta Oromia (OLF) ay la gashay ciidanka dowladda.
Dagaallada ugu culus waxay ka dhaceen magaalada “Hiddi lolaâ€ ee gobolka Borane, sida ay soo tabiyeen saraakiisha Oromada gaadiidka ciidanka xambaara ayaa ciidamada Itoobiya looga gubay bartamaha magaalada.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Meydadka 30 Askari Itoobiyaan ah lagu arkay “Hiddi lolaâ€ oo ah magaalo ay ku xooganyihiin dagaalyahanada Jabhadda OLF iyo dadka taageersan.
Dhinaca kale iskusoo baxyo ay dhigayaan shacabka Itoobiya ayaa lagasoo sheegayaa magaalooyinka ay degaan qowmiyadda Nasaarada Amxaarada iyoÂ qowmiyadda muslimiinta Oromada.
Xaaladda wadanka Itoobiya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xumaanaysa, xukuumadda Addis Ababa ayaa dagaalka wadankeeda ka socda ku eedaysay in ay soo abaabuleen dowladaha Ereteria iyo Masar.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Radio Andalus 17-01-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 17-01-1438 Hijri.